Gravity Zvishongo - Dhizaini magazini
Zvishongo Ndichiri muzana ramakore re 21, kushandiswa kwetekinoroji dzemazuva ano, dzezvigadzirwa zvitsva kana zvemafomu matsva kazhinji kazhinji kunofanirwa kuita hunyanzvi, Gravity inoratidza zvinopesana. Giraidziro muunganidzwa wezvishongo zvinoshandurwa uchishandisa chete tambo, hunyanzvi zvekare, uye simba rinokwevera zvinhu zvisinga peri. Iko kuunganidzwa kunoumbwa nehuwandu hukuru hwe sirivheri kana goridhe zvinhu, nezvakasiyana zvigadzirwa. Chimwe nechimwe chazvo chinogona kusangana nemapere kana matombo mabwe uye mapenduru. Iko kuunganidza kunokanganisa zvakadaro kusakwana kwezvishongo zvakasiyana.
Zita rechirongwa : Gravity, Vagadziri zita : Anne Dumont, Izita remutengi : Anne Dumont.
Zvishongo Anne Dumont Gravity